Ms Scott ayaa ka mid ah haweenka dunida ugu taajirsan waxayna bixisay in ka badan $ 4bn (£ 2.9bn) hantideeda.
Wararka la xiriira guurkeeda iyo Dan Jewett ayaa lagu shaaciyay website-ka hay'adda samafalka ee Giving Pledge.
"Dan waa nin aad u wanaagsan, waana ku faraxsanahay guurkooda," ayuu Mr Bezos ku yiri hadal uu soo saaray.
Ms Scott, oo hantideeda lagu qiyaaso $ 53bn sida ku cad Forbes, ayaa sheegtay inay dooneyso inay bixiso inta badan.
Tan iyo markii ay kala tageen iyada iyo seygeedii hore waxay bixisay lacag dhan 1.7 bilyan oo doollar oo kaalma ah.
Sababta uu taajir u sii noqonayo ninka dunida ugu qanisan
Boggeeda qoraaga Amazon ayey ku sheegtay inay "ku nooshahay Seattle iyada iyo afarteeda carruur ah iyo seygeeda Dan." Wuxuu wax ka dhigaa iskuulka ay dhigtaan caruurteeda.
MacKenzie Scott iyo Dan Jewett.
XIGASHADA SAWIRKA,GIVING PLEDGE
Ms Scott waxay hada ku jirtaa kaalinta 22-aad ee qofka ugu taajirsan dunida halka Mr Bezos uu kaalinta koowaad ku jiro hantidiisa $ 177bn.
Website-ka The Giving Pledge waxaa loo sameeyay dadka bilyaneerada ah ee ballanqaada inay hantidooda qaar ka mid ah ugu deeqayaan hay'adaha samafalka.